Iibso Awood Weyn Canvas Mountaineering Men Rucksack - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Arrimaha Gudaha: Jeebka kabaha, Holder Key Chain Holder,Pock Gudaha,Jeebka Gudaha,Jeebka gacanta
Waxyaabaha: Canvas tayo sare leh
Isticmaalka boorsada: Boorsada maalinlaha ah, Bacda Safarka, Boorso Tote ah
Cabbir yar: 26cm * 45cm * 20cm (Dhererka * Dhererka * ballaaran)
Cabbirka weyn: 30cm * 55cm * 20cm (Dhererka * Dhererka * ballaaran)
Aad ayaan ula yaabay tayada. Si fiican loo sameeyay, wuxuu dareemayaa si adag.
Badeecad aad u fiican. Waa ta labaad ee aan iibsado. Aad u xoog badan oo boos badan leh. Mahadsanid dukaanka.